Mitambo yekudzidzira muzhizha - Zvakanakisa zvekufunga nezvazvo | Bezzia
Mitambo yakanakisisa yekudzidzira muzhizha
Susana godoy | 14/06/2022 16:00 | Exercise
Mitambo yekudzidzira muzhizha inogona kuva yakasiyana-siyana. Nekuti nekuda kwekuuya kwemamiriro ekunze akanaka, tinogona kubuda uye kunakidzwa nemhepo yakachena kuti titakurwe nekufamba kudiki. Ichokwadi kuti tinofanira kukanganwa nezvemazuva anopisa uye maawa epakati ezuva, kudzivisa mabasa ose emhando iyi.
Asi kana munguva pfupi mazororo achange ari vatsigiri vehupenyu hwako, iwe unogona kugara uine zvishoma zvezvose. Kune rumwe rutivi zororo rakakodzera, asi kune rimwe rinonakidza nenzira yekudzidzira. Nenzira iyi, muviri wako ucharamba uchishanda, uye zvinonyanya kukosha, hutano semugore rose. Ngatitange!
1 Kushambira imwe yemitambo yakanakisa yekudzidzira muzhizha
3 The surf
5 paddle surfing
Kushambira imwe yemitambo yakanakisa yekudzidzira muzhizha
Ichokwadi kuti kushambira kunogona kuitwa gore rose. Kuenda kudziva munguva yechando zvakare isarudzo yakanakisa. Asi zvine musoro kana mwaka wezhizha wasvika, zvinoita sekunge kurudziro inotitora. Yave nguva yekuzvirega isu tichitakurwa neimwe yemitambo yakakwana. Icho chaicho ndeimwe yeakanakisa sarudzo uye yeese mazera kana mamiriro. Kunyangwe kune vanhu vane dambudziko remusana kana vakadzi vane pamuviri. Pakati pezvakanakira kushambira tinogona kutaura kuti inovandudza kushanduka asiwo simba uye kutsungirira. Panguva imwecheteyo tinosiya shure kwehuwandu hwakanaka hwekoriori.
Kunyangwe munguva yechando tinogonawo kuita nzira isinganzwisisike, hapana chakafanana nekunakidzwa nekufamba kana mamiriro ekunze ari nani. Kuti tiite izvi, tinofanira kusarudza mazuva asina kupisa zvakanyanya. Kubva ipapo chete tichanakidzwa nerwendo uye nemamiriro ekunze zvakanyanya. Kufamba ndechimwe chezviitwa zvinokurudzirwa zvisinei nemwaka watiri. Pamusoro pekubatsira muviri, zvinobatsirawo kupfungwa, nekuti zvinozotizorodza uye kubvisa kushushikana kwese.
Pasina kupokana, ndiwo mutambo wenyeredzi wezhizha. Nekuti iwe unogona zvakare kutora mukana wemamiriro ekunze akanaka uye mahombekombe kuti uedze. Zvechokwadi pedyo nekwaunogara kana kwaunopedza zhizha pachava nemakirasi emutambo uyu. Vese vakuru nevana vachange vaine makirasi akachinjirwa kune nhanho yavo uye zvishoma nezvishoma iwe unozogona kunakidzwa neadrenaline iyo kusefa kunotisiya.. Iwe unoziva kuti kuvonga kwazviri iwe unogona zvakare kudzoreredza muviri wako uye kusimbisa mhasuru dzako. Pasina kukanganwa kuti inzira yakakwana yekubvisa kushushikana.
Hazvisi nyore, unofanira kubvuma. Asi kitesurfing zvakare imwe yedzimwe nzira dzekukwanisa kuve pabhodhi uyezve, pamvura. Asi nekuwedzera kune yakataurwa bhodhi iwe uchafanirwa kutyaira kite, saka dzikamo nemafungiro ndizvo zvakakosha pakudzidzira mutambo wakadaro. Izvo zvakare hazvirwadze kuti isu tinyore mukosi yekudzidza izvo zvekutanga, pamwe neakanakisa matipi. Isu tinokuvimbisa kuti tsika yakadai ichaita kuti adrenaline yako ipfure, ichiita basa rakakura reaerobic.
Tichitora mukana wegungwa uye mamiriro okunze akanaka, tinoenderera mberi tichitaura nezvemapuranga ari pamvura. Muchiitiko ichi, tine Paddle surfing, inova imwe yesarudzo huru muchimiro chemitambo yakanakisa yekudzidzira zhizha rino. Iwe unozofanirwa kuchengetedza chiyero chako pabhodhi uye uzvibatsire nepaddle kuti uenderere mberi. Hongu, zvinoita sezviri nyore asi hazvisi nguva dzose zvakadaro. Nekuda kwechiitwa chakadai, iwe unozogona kushanda akasiyana mhasuru mapoka emuviri wese. Kunyangwe iwo makuru achave mapatya kana matako, asi pasina kukanganwa kuti abdominals kana pectorals uye biceps zvichapindawo mukutamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Exercise » Mitambo yakanakisisa yekudzidzira muzhizha
Kusavimbika sekutsiva kune vakaroorana
Netflix's Top Series: 'Amai Vakakwana'